Alessandro Del Piero Oo Ka Hadlay Layaabkii Qabsaday Markii Zinedine Zidane Ku Laabtay Real Madrid, Xusuustiisa Maalintii Looga Kacay Santiago Bernabeu Iyo Inuu Jeclaa In ZIZOU Tago Juventus - Cadalool.com
Alessandro Del Piero Oo Ka Hadlay Layaabkii Qabsaday Markii Zinedine Zidane Ku Laabtay Real Madrid, Xusuustiisa Maalintii Looga Kacay Santiago Bernabeu Iyo Inuu Jeclaa In ZIZOU Tago Juventus
Halyeygii kooxda kubadda cagta Juventus ee Alessandro Del Piero ayaa ka hadlay sidii uu noqday dareenkiisu markii ay Real Madrid ku dhawaaqday inay dib usoo ceshatay Zinedine Zidane kaddib sagaal bilood oo uu kasii maqnaa shaqada uu marka hore iska casilay.
Alessandro Del Piero iyo Zinedine Zidane ayaa waqti qurux badan kusoo wada qaatay Juventus oo ay u wada ciyaari jireen ka hor intii aanu ZIZOU go’aansanin inuu u wareego Real Madrid oo uu lugtiisa ugu qaaday Champions League xili ciyaareedkii 2001/02.
Del Piero oo waraysi dheer siiyey wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa waxa uu qayb ka mid ah kaga hadlay sidii ay layaabka ugu noqotay markii uu Zidane ku laabtay Real Madrid.
Wariye ka tirsan Marca oo waraysiga ka qaaday ayaa waxa uu weydiiyey Del Piero, inay layaab ku noqotay iyo in kale markii uu Zidane kasoo muuqday Santiago Bernabeu isagoo dib u aqbalay shaqadii uu dhamaadka bishii May ee sannadkii iska casilay, waxaanu ku jawaabay: “Layaab ayay igu noqotay, gaar ahaan wuxuu kasoo horreeyey xilligii la filayey. Zidane wuu jecel yahay Real Madrid waxaanu halkaas kula nool yahay qoyskiisa. Xidhiidh weyn ayuu la leeyahay naadiga. Markaa layaab weyn may ahayn, laakiin way soo degdegtay. Waxay ila tahay Florentino Perez ayaa qorshe cad kusoo celiyey Zidane oo saddex Champions League oo xidhiidh ah u qaaday. Waxay ahayd shaqaalaysiin caqli ku dhisan.”
Alessandro Del Piero ayaa la weydiiyey inuu jeclaan lahaa in Zidane uu noqdo tababaraha Juventus, waxaanu ku jawaabay: “Zidane waa saaxiibkay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko meel uun, xataa inaanu wada cabno sharaab! Juventus hore ayay u haysatay tababare wanaagsan oo wax fiican qabtay. Hadda Zidane sheekadiisu way dhamaatay, waxaanu joogaa Real Madrid.”
Wariyaha ayaa weydiiyey Del Piero su’aal ahayd: “Zidane waa halyey Real Madrid ah, laakiin adiga naf ahaantaada kooxdu ixtiraam ayay kuu haysaa. Maxaad ka xasuusataa maalintii taageereyaashu kuu kaceen gudaha Estadio Santiago Bernabeu?”
Alessandro Del Piero ayaa ku jawaabay: “Layaab ayay igu noqotay. Waqti adag ayaanu ku jirnay, dhaawacyo badana way jireen, waxaananu halkaa u tagnay inaanu aragno waxa dhaca (Real Madrid oo ay la ciyaarayeen). Ciyaar fiican ayaanu ciyaarnay, aniguna laba gool ayaan dhaliyey, dhamaadkiina tababaraha ayaa i beddelay, laakiin su’aal ayaan naftayda weydiiyey, waxaan is idhi ‘ma adiga ayay dadku kuu sacbinayaan?’ Waxay aahayd waqti cajiib ah. Kubadda waxaad u ciyaartaa inaad guuleysato iyo inaad taageereyaasha ka farxiso. Marka ay xaaladahani ka dhacaan garoonka kooxda kaasoo horjeeddana way kasii fiican tahay, waxaana kaba sii wanaagsan marka aad Real Madrid kula ciyaarto Bernabeu. Waxay ahayd arrin gaar ah oo iiga dhignaa sidii aan koobka ku guuleystay.”